ရေ အထောက်အထား ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > multi အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ရေ အထောက်အထား ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
ရေ အထောက်အထား ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-M စီးရီး ရေ အထောက်အထား ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r ဖြစ် အသုံးချ တွင် ထိန်းချုပ်မှုlတွင်g အမျိုးမျိုးသော အဆို့ရှင် နှင့် အခြား တူသော ထုတ်ကုန်, တွင်clude လိပ်ပြာ အဆို့ရှင်, အလုံး အဆို့ရှင်, ဂိတ် အဆို့ရှင်, ထိန်းချုပ်မှု အခင်အရှင် နှင့် etc.The AOX-M စီးရီး ရေ အထောက်အထား ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r များမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ နှင့် liftတွင်g rတွင်g ဘို့ လွယ်ကူသော hနှင့်lတွင်g နှင့် အပေါ် site ကို တွင်stallatiအပေါ်.Over အဆိုပါ အနှစ် ကျွန်တော်တို့၏ ထုတ်ကုန် ရှိ ဖူး တင်ပို့ တွင် သုတ် တိုင်း တစ်နှစ်, နှင့် ရှိ ဖူး ကျယ်ပြန့် နှင့် အောင်မြင်စွာ အသုံးပြုခံ့ တွင် ရေ ကုသမှု, ရေနံ, လျှပ်စစ် ပါဝါ, ဓါတုဗေဒ နှင့် အခြား တွင်dustries.AOX လိမ့်မည် ပုံစံ နှင့် ပြုလုပ် ထုတ်ကုန် ညီညီညွတ်ညွတ် နှင့် cအပေါ်tတွင်ue ကျွန်တော်တို့၏ efဘို့ts သို့ ဖန်တီး နောက်ထပ် အဘိုး ဘို့ cusသို့mers.
ambient အပူချိန်: -30Âဒီဂရီစင်တီဂရိတ် - + 70Â° C မှမထည့်: -40Â° C- 60Âဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သက်ဆိုင်ဗို့အား:3အဆင့်: AC အ 380 V ကို (a 10% ±) / 50/60 Hz (က 5% ±)
optional ကို: 1 အဆင့် AC အ 220 V ကို
manual / အော်တို clutch switching
နှစ်ဆတံဆိပ်ခတ်သီးခြားဝင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအရာ terminal သေတ္တာ, on-site ကိုဝါယာကြိုးလုပ်ဖွင့်သေတ္တာအဖုံးလျှင်အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့တံဆိပ်ခတ်ခြင်းသမာဓိရှိအလေးအနက်ပြောကြားလိုပါတယ်။
AOX-M စီးရီးရေအထောက်အထားပေါင်းစုံအလှည့်လျှပ်စစ် actuator များအတွက် 2. လက်စွဲစာအုပ်စစ်ဆင်ရေး
- ကော်မရှင်ခုနှစ်တွင်သို့မဟုတ်အရေးပေါ်အတွက် actuator handwheel အားဖြင့် operated နိုင်ပါသည်။
- ထို actuator နှင့်မော်တာအဆက်ပြတ်နှင့်မော်တာများနှင့် operating ရိုးအကြား Self-သော့ခတ်တီကောင်ဂီယာကွဲကွာနေကြ operation.Because လက်စွဲစာအုပ်စတင်ရန်အနီရောင်ခလုတ်ကို operating ခြင်းအားဖြင့်, ITA လက်စွဲစာအုပ်စစ်ဆင်ရေးမှဖွင့်ရန်အလွန်လွယ်ကူသော့အဆိုပါ actuator ဖြစ်ပါတယ်လျှင်ပင် အများဆုံး torque မှာ running ။
- ထိုမော်တာလက်တော်ဘီးအလုပ်မလုပ်ပါဘူး operating ဖြစ်ပါတယ်အခါမော်တာစတင်ပြီးနောက်အလိုအလြောကျသှားလက်စွဲစာအုပ်စစ်ဆင်ရေးကနေချိုးတော်မူ၏။
အထူးဒီဇိုင်းမြင့်မားစတင် torque မော်တာ, မကြာခဏအပြည့်အဝတံခါးပိတ်အနေအထားကနေအဆို့ရှင်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ သုံးအဆင့် AC အမော်တာများအပြင်, Single-အဆင့် AC အကိုလည်းပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator turn အထောက်အထား AOX-M စီးရီးရေများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။
Zhejiang Aoxiang Automation နည်းပညာ Co. , Ltd ကုမ္ပဏီ 16.200 စတုရန်းမီတာတစ်ဆောက်လုပ်ရေးဧရိယာနှင့်အတူ, 12.300 စတုရန်းမီတာဧရိယာဖုံးလွှမ်း 1997 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံဧရိယာ 12.600 စတုရန်း meters.The ကုမ္ပဏီဒီဇိုင်း, သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်း, ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့် training.The နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုပေါင်းစပ်နီးပါး 23 နှစ်ကြာလျှပ်စစ် actuators တွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုအထူးပြုနေတဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည် စွမ်းရည်မြှင့်ပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator turn သက်သေထက်ပို 60000 ယူနစ် AOX-M စီးရီးရေဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ 20 ကျော် years.The အဓိကအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများစက်စင်တာတို့ပါဝင်သည်, CNC တွင်ခုံ, CNC ကြိတ်စက်, CNC တူးဖော်စက်, CNC တူးဖော်စက်, ပလာစမာရေမှုန်ရေမွှားဂဟေဆော်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ရေမှုန်ရေမွှားခြောက်သွေ့လိုင်းနှင့်အခြားများအတွက်လျှပ်စစ် actuators များထုတ်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့ပြီး ပစ္စည်းကိရိယာများ, ကြိတ်, ငြီးငွေ့စရာ, တူးဖော်ခြင်း, ပစ်, ကြိတ်ခြင်းနှင့်စက် tools.AOX ၏အခြားအမျိုးအစားများကိုအဆင့်မြင့်စက်ကိရိယာများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator turn အထောက်အထား AOX-M စီးရီးရေအရည်အသွေးကောင်းအာမခံထားသည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအပေါ်တင်းကျပ်သောထိန်းချုပ်မှု, နိုင်ပါတယ်။
မေး: AOX-M စီးရီးရေအထောက်အထားပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ဘို့ငါတို့နိမ့်ဆုံးအမိန့်အရေအတွက်မည်မျှရှိသနည်း
မေး: ပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator turn AOX-M စီးရီးရေအဘို့သင့် Pack အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအထောက်အထားကဘာလဲ?
ဖြေပုံး & ထပ်သားဖြစ်ရပ်မှန် / ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်အရသိရှိရသည်။
hot Tags:: ရေ အထောက်အထား ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်